Stefan Lövfen oo walaac ka muujiyey dabkii la qabadsiiyey macbadka Yahuuda ee Göteborg | Somaliska
Stefan Lövfen oo walaac ka muujiyey dabkii la qabadsiiyey macbadka Yahuuda ee Göteborg
Ra’iisal wasaaraha dalkaan Iswiidhan ayaa dareen adag ka muujiyey falkii lugu beegsaday dhismaha macbadka Yahuuda ee habeenimadii axadda soo galeeysay, kaas oo ku yaala magaaladda Göteborg. Ra’iisal wasaaraha oo wareysi siiyey wakaaladda wararka u faafisa dalkaan ee TT, ayaa sheegay inuu ku rajo weeyn yahay in ciqaab weyn la marsiin doono shaqsiyaadkii ka dambeeyey falkaasi.
“Waxaan ku rajo weeynahay in sida cad kuwii dambigaas geeystay la marsiiyo ciqaab weyn” ayuu yiri isagoo dhinaca kalena sheegay inuu ka walaacay falkaas. Ra’iisal wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay haatan dareemayo walaac la xirriira naceybka loo hayo Yahuuda oo ay muujinayaan dadyowga bariga dhexe ka yimaada.
Dhinaca kale magaaladda Malmö ayaa banaan bax ka dhacay jimcihii dadkii banaanbaxayey ku dhawaaqayaan ereyo ka dhan ah Yahuuda, ereygadaas qudhooda aad looga guuxay. Ra’iisal wasaaraha ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo doodo iyo aqoon la xirriirta sida aan loo aqbali karin naceybka ka dhanka ah Yahuuda.
Wasiiradda arrimaha dibadda Iswiidhan Margot Wallström, oo haatan ku sugan magaaladda Burugsel ee dalka Beljim ayaa sheegtay ineey arrimahan kala hadashay ra’isal waasaraha Israa’iil ee Benjamin Netanyahu. Waxaa ay sheegtay in dalalka Yurub looga baahan yahay siddii looga hortagi lahaa falalka ka dhanka ah Yahuuda ee lugula kaco. Waxaa soo kordhacaya walaaca haatan laga qabo falalka ka dhanka ah Yahuuda. Kaas oo yimid wixii ka dambeeyey isku daygii lugu doonayey in la gubo macbadka Yahuuda ee Göteborg ku yaala.